Jasiiradda Seycheles oo lagu maxkamadeeyey rag loo haysto burcad-badeednimo. – Radio Daljir
Jasiiradda Seycheles oo lagu maxkamadeeyey rag loo haysto burcad-badeednimo.
Seycheles, July 02 – Maxkamad ku taalla Jasiiradda Seycheles ayaa dhallinyaro Soomaali ah oo ku eedaysan burcad-badeednimo waxaa ay ku ridday xukunno xarig muddo dheer ah kaddib markii lagu helay dambiyo ah in ay isku-dayeen af-duub doonyo iyo shaqaalihii saarnaa.
Maxkamadda ayaa markii ay dhagaysatay eedaymaha raggaan Soomaalida ah ku xukuntay min 18 sano oo xarig ah kaddib markii la helay caddaymo waafi ah oo la xiriira burcad-ahaanshahooda.
Dambi-oogaha maxkamadda dacwaddaan qaadaysay ayaa sheegay raggaani in ay weerareen labo doonyood oo kuwa Kalluumaysiga ah lagana lahaa waddan faransiiska, waxaana maxkamadda horteeda la keenay agabkii ay wax ku weerareen oo u badnaa qoryaha fudud.
Jasiiradda Seycheles, waxaa ku xir-xiran rag badan oo Soomaali ah oo loo haysto galitaanka dambiyo la xiriira falalka burcad-badeednimada, kuwaasi oo qaar ka mid ah horay sidaan oo kale loo maxkamadeeyey, halka kuwa kalena ay weli maxkamad sugayaal yihiin.